Niteraka mahery fon’ny COVID-19 tsy nahy tao Aostralia ny fahadisoan-tsoratra Ken Behrens-Canberrans · Global Voices teny Malagasy
Soratry ny FAVO mampihevaheva kely ny renivohitry ny firenena
Voadika ny 06 Septambra 2021 4:19 GMT
Hanihanim-pahadisoan-tsoratra amin'ny sary Ken Behrens-Canberrans: pika avy amin'ny horonan-tsary YouTube ACT 13 aog 2021 an'ny 9 News Australia ‘mandrakitra tranga COVID-19 vaovao roa eo an-toerana + lahatsoratra
Tokony hanana maherifo tsy nahy iray farafaharatsiny ny areti-mandringana rehetra. Amin'ny tranga ao Aostralia, nisy ny voninahitra nomena noho ny hadisoana an-tsoratra. Rehefa nisaotra ny mponina tao Canberra renivohitra ny lehiben'ny minisitry ny Faritany Aostraliana, Andrew Barr tamin'ny 13 aogositra 2021, noho ny fahavononany hijanona ao an-trano mandritra ny fihiboana COVID-19, dia tsy nampoiziny ny vokany.
Notendrena handika an-tsoratra ny lahatsary nandritra ny valan-dresaka ho an'ny media i Mitch Bowey. Nampiasa rindrambaiko Faharanitan-tsaina Voatr'Olombelona (IA=AI=FAVO) izy hamadika ho soratra ny voambolana “Canberrans.” Nanolotra sosokevitra hafahafa ilay FAVO hoe “Ken Behrens.”
Niaiky i Mitch fa tsy nahita ilay hadisoana:
#KenBehrens, maherifon'ny androntsika.
Vetivety dia nitohy ny fihazana izay loharano. Ilay mpanao gazety ao amin'ny Canberra Times Andrew Brown nisioka hoe:
Ianao tokoa ve no Ken Behrens tena izy? Mipetraka any Canberra ve ianao? Ianao ve no tena mahery fo ankalazain'ny Sefo amin'ny mpanao gazety? Raha izany dia misokatra ny Hafatra ho ahy manokana
Raha vantany vao tsikaritr'ireo mpampiasa media sosialy ilay lesoka, dia lasa meme malaza izany – izay nanana ny fiainany haingana. Ny sasany aza mivazivazy fa mety hiafara amin'ny fidirana Aostralianisma ao amin'ny Rakibolana Nasionaly Aostraliana, miaraka amin'ireo mahazatra toa ny, “doing a Bradbury” izany.
Niteraka entam-barotra an-tserasera marobe ilay fahadisoana, ao anatin'izany ny T-shirt, kaopy kafe sy fonona ondana kely milaza hoe “Ken Behrens daholo isika.”
#KenBehrens avokoa isika rehetra
Tonga izany! @RealKenBehrens #KenBehrens
Nanatevin-daharana ny fanalana andro ihany koa ny haino aman-jery Canberra teo an-toerana:
Misy androany ny fanontana vaovao #KenBehrens mpivoaka isan-kerinandro, misy ao amin'ny aterineto sy amin'ny toeram-pivarotana voafetra manerana ny ACT. Alao maimaim-poana!
Ny tena Ken Behrens
Avy aiza àry ity andinin-teny maminavina hafahafa ity? Toa hita fa nisy ny Ken Behrens nofo aman-drà. Avy any Etazonia izy, ary monina any Madagasikara ankehitriny ary mpaka sary bibidia izy. Niasa ho mpitari-dalana fizahan-tany momba ny tantara voajanahary i Ken-talohan'ny COVID ary nanoratra boky maro momba ny tantara voajanahary. Niresadresaka tamin'i Ginger Gorman avy ao amin'ny Her Canberra izy taorian'ny “nahitany azy”:
Ho setrin'ny teny tsara nataon'ny Lehiben'ny minisitra Andrew Barr, dia tiako ny milaza hoe “Tsy maninona”; p. Aza milaza aminy azafady fa tsy ato an-trano mihitsy aho izao!
Nanjary mpiara-miasa tamin'ny podcast “Naturally Adventurous” tamin'ny volana Jolay 2020 i Ken. Na dia nivezivezy loatra aza izy, dia mbola tsy tonga taty Aostralia.
Faly i Ken noho ny zom-pirenena am-boninahitra any Canberra ary niresaka momba ny fifangaroana tao amin'ny kaontiny media sosialy. Nizara vaovao momba ny famoronana Andro Donat (mofomamy) maimaimpoana natao ho fanomezam-boninahitra an'i “Ken Behren” koa izy.
Mikatona ny andron'ny mofomamy noho ny fanondroana tranga COVID aotra matetika – antony mazava hanaovana fankalazana mandritra ny fihiboana. Loka mendrika tokoa ho an'ny maherifo vaovao ankafizin'i Aostralia.